သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေအငွေ့ Extractor -> အိတ်ဆောင်အငွေ့ Extractor
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. တစ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါတယ် အိတ်ဆောင်အငွေ့ Extractor။ အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့လက်နက်ကိရိယာများကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအချို့လက်မှတ်များ၏လုပ်ငန်းများပြီးဆုံးလွန်ပြီ။ တချို့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်များအကြောင်း။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုအောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကိုစိတ်ဝင်စားပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှအခမဲ့ခံစားရကိုကျေးဇူးတင်ပါ, ကျနော်တို့ကအသေးစိတ်အတွက်သင်နှင့်အတူစကားပြောဝမ်းမြောက်လိမ့်င်!
အမြိုးမြိုးအရွယ်အစားနှင့်စတုရန်းပတ်လည်, D ကိုပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အခြားသူများတူမြောက်မြားစွာပုံစံမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်း။
တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, Main-powered အငွေ့ထုတ်ယူယူနစ်အော်ပရေတာများချက်ချင်းနယ်စပ်မှဂဟေအငွေ့မဖယ်ရှားသည်။
● built-in, အစားထိုး, activated ကာဗွန် filter ကိုလေထဲတွင် re-ပျံ့နှံ့လျက်ရှိရာမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အစိုင်အခဲအငွေ့အမှုန်ဖမ်းဆီးဖို့ကူညီပေးသည်။
●ထူးခွားသမျက်စိယားယံ, ပျို့ခြင်း, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချပေးသည်။
● Adjustments tilt ဦးခေါင်း။
သံက 120 soldering ကနေ 150mm မှ●အကြံပြုထားသည့်အကွာအဝေး
●3filter များနှင့်အဓိကဗြိတိန်နိုင်ငံ 13 plug တပ်ဆင်ခဲနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံထောက်ပံ့။
●အစားထိုး filter များ3ထုပ်ရရှိနိုင်ပါတယ်နှင့်သူတို့အရောင်ပြောင်းဖြစ်လာသောအခါသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံမြေမှုန့်စုဆောင်းမိသောအခါပြောင်းလဲသင့်သည်။
အဆိုပါ 468ESD အငွေ့ Extractor အလုပ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေ noxious အငွေ့မဖယ်ရှားတစ်ဦးအဆင်ပြေပြေနဲ့အာကာသကယျတငျခွငျးသို့ method ကိုပူဇော်လော့။ R & D အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဝါသနာရှင်အသုံးပြုပုံစက်ရုံကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, ဒီထုတ်ကုန်အသစ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုမဖယ်ရှားသဖြင့်မကြာခဏဂဟေဆက်အငွေ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ပျို့ချင်နှင့်မျက်စိကျိန်းစပ်အလုပ်ကိုနေရာတိုးတက်ရန်အနေနဲ့စီးပွားရေးအရနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အဆိုပါ 468ESD အငွေ့ Extractor မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပန်ကာနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် activated ကာဗွန် filter ကိုအစားထိုးအနေနဲ့လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ filter သန့်စင်ပြီး activated ကာဗွန်နှင့်အတူတိကျသောအမြှုပ်ဝင်ရောက်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကာဗွန် filter ကို noxious အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၎င်း၏ကာဗွန်အလေးချိန်၏ 30% အထိကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်နေစဉ် filter ကိုမြေမှုန့်စုစည်းထိရောက်မှုက 30% ဖြစ်ပါတယ်။